Wenezdee 25 Ọgọọst 2021
Nri Ụọ Mma Mma dị ka ọla mara mma ị nwere ike ị drinkụ! Anyị mekọtara ihe abụọ ejiri tii ọnụ: candies Rock na Mpekere lemon. Ekike a anaghị eri nri kpamkpam. Site na ịgbakwunye Mpekere lemon na ihe owuwu swiiti, ụtọ ya na-adịwanye mma ma bụrụkwa nri nri na-abawanye n'ihi vitamin nke lemon. Ndị mmepụta ahụ ji dochie mkpanaka ndị na-eme ka chiri kristal jiri obere lemon. Beautyụ Mma bụ ihe atụ zuru oke nke ụwa ọhụụ nke na-eweta mma na arụmọrụ ọnụ.
Ihe Ọ Beụverageụ
Tiuzdee 24 Ọgọọst 2021
Ihe Ọ Beụverageụ Ihe osise a bu ihe omuma ohuru nke nwere Chia, isi okwu ya bu imebe mmanya nke nwere otutu uto.Otu a na abia n’adiri di iche iche nke apuru ihu n’okpuru oji n’eto nke na-eme ka odi nma maka oriri na oriri. Chia nwere ike ịnabata ma chekwaa ụtọ na agba ọ bụla, yabụ, mgbe mmadụ mere mmanya na Firefly nwere ike ịnweta ụdị ọkụ dị iche iche site na nzọụkwụ.Ọdịmma nri nri nke ngwaahịa a dị elu ma atụnyere ndị ọzọ na oke kọlịflawa na nke ahụ niile bụ n'ihi uru nri nri Chia nwere na obere kalori dị ala. . Ihe osise a bu isi okwu ohuru n’ime ihe omuma banyere mmanya na mmanya.
Mọnde 23 Ọgọọst 2021
Kapusi Wild Cook kapusi, bu okpu-agha nke nwere ihe ndi ozo di iche iche nke eji aru aru aru, ma emere ya ka o foodua nri ma mepụta udiri na isi di iche iche. Otutu ndi mmadu kwenyere na otu uzo isi mee ka nri smua mma bu site n’itecha umu osisi di iche iche ma ihe bu eziokwu bu na inwere otutu ihe iji mee ka nri gi okedua ma juo uto na isi uto. Ndị rụpụtara ụlọ ahụ ghọtara ihe dị iche iche dị ụtọ n'ụwa, ọ bụ ya mere ihe osise a jiri gbanwee kpamkpam ma a bịa n'ihe gbasara ojiji a na-ahụ maka mpaghara dị iche iche. Capsules ndị a na-abata na ngwakọta a gwakọtara agwakọta.
Mbọsị Ụka 22 Ọgọọst 2021
Curling Iron Ngwurugwu nano airy curling na-eji teknụzụ ion na-adịghị mma. Na-emekwa ka udiri ederede dị mma, nke na-egbu maramara nke ogologo oge.The curling pipe abanyela mkpuchi nano-seramiiki, na-enwe ezigbo ọmarịcha. Ọ na-agbaji ntutu isi nwayọ na ngwa ngwa na-ekpo ọkụ ikuku nke ion ọjọọ. Tụnyere ihe dị n'ụdọ na-enweghị ikuku, ị nwere ike ịmecha ntutu dị nro karị. Colorcha nke ngwaahịa ahụ dị nro, dị ọkụ ma dị ọcha matte na-acha ọcha, ụcha ụda ya bụ ọla edo pink.
Satọdee 21 Ọgọọst 2021
Idozi Ntutu Nano airy na-agbatị ihe eji eme ka nano-seramiiki na teknụzụ ọhụụ na-adịghị mma, nke na-ebute ntutu nwayọ nwayọ na nwayọ nwayọ ngwa ngwa. Ekele n ’igwe ndọta ahụ n’elu okpu na ahụ, ngwaọrụ ahụ na-agbanyụ na akpaghị aka mgbe emechiri okpu ahụ, nke nwere nsogbu ị ga-ebugharị. Anakpo kompeni ahu nwere ihe eji akpoghari akuko USB nke di nfe di nfe ịchekwa na akpa aka na ebu, na-enyere ndi nwanyi aka idozi ntutu mara nma n’oge obula, n’ebe obula. Atụmatụ ụcha na agba ọcha nwere agbazinye ngwaọrụ na agwa nwanyị.
Fraịdee 20 Ọgọọst 2021
Igbe Nri Ehihie Lọ ọrụ na-ahụ maka nri na-aga n'ihu na-aga n'ihu, iweghara ihe wee bụrụ ihe dị ndị mmadụ mkpa n'oge a. N'otu oge ahụ, emepụtakwala ọtụtụ ihe mkpofu. Enwere ike ijigharị ọtụtụ n'ime igbe nri iji jide nri nwere ike ibughari, mana akpa plastic ndị e ji etinye igbe nri bụ ndị a na-agaghị emezigharị. Iji belata iji akpa rọba, a na-ejikọ ọrụ nke igbe nri na rọba iji chepụta igbe nri ehihie ọhụrụ. Igbe nke bale na-atụgharị akụkụ nke onwe ya ka ọ bụrụ aka dị mfe iburu, ma nwee ike ijikọ ọtụtụ igbe nri, na-ebelata oke n'iji akpa rọba maka ịkwakọ igbe nri.
Gamsei Mmanya Mmanya Satọdee 18 Septemba
Aix Arome Cafe Kafe Fraịdee 17 Septemba
Wuhan Pixel Box Cinema Sinima Tọọzdee 16 Septemba
Nri Ihe Ọ Beụverageụ Kapusi Curling Iron Idozi Ntutu Igbe Nri Ehihie